Kalvin's Web Diary: Myanmar Wikipedia or something else ?
« Home | Dear Yesterday » | Black & White » | Goodbye Granny, we will miss you » | BSOD ? » | Kill the frigging DLL !!!!!!!! » | After 1 week » | Day2and Day3» | Quit Smoking! » | A few tips on Social Networking » | Life like that. »
4 Responses to “Myanmar Wikipedia or something else ?”
# mmhan 11:38 AM
The tone of your post might be somehow offensive to the contributors.
But I do agree with you on this one that without havingastandardized unicode, none should have started this Myanmar Wikipedia.
# ဦးထိပ် 7:42 PM
သေချာတာကတော့ အဲဒီ ဟာတွေကို အင်တာနက် ကဖေးမှာ ဖတ်လို့မရတာပဲ ဗျာ . . .
အင်တာနက်ကဖေးများမှာ အသုံးများတာ ဇော်ဂျီပါပဲ . .
၀င်လေ့လာချင်သော်လည်း ဖတ်မရတဲ့နေရာက စာတွေဖြစ်နေတယ်ဗျာ
အင်တာနက်ပေါ်မှာ စသုံးတာကတော့ ၀င်းဖောင့်နဲ့ ပါပဲ . .
အဲဒီကနေမှ ဇော်ဂျီ ကို ပြောင်းလာခဲ့တာပေါ့ . . ဘလော့မှာတောင် ၀င်းဖောင့်နဲ့ တင်ထားတာရှိသေးတယ် . . စွယ်စုံကျမ်းဆိုတဲ့ အမည်အတိုင်း အရာအားလုံး အမှန်အတိုင်းရှိရင် မြန်မာတွေ မျက်နှာ မငယ်ရတာပေါ့ဗျာ . .
ယူနီကုတ်ကို ဘယ်လို သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာတော့ နားမလည်ပါ
စွယ်စုံကျမ်း ဆိုတာကတော့ လိမ်ညာ မရေးသင့်ဘူးဆိုတာကတော့ အသေအချာပါပဲ . .
# bibilophile 6:05 AM
ယူနီကုတ်အစစ်အမှန်ဖောင့် အမျိုးအစားနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာကို ဘယ်ယူနီကုတ်ဖောင့်နဲ့ မဆိုဖတ်လို့ ရပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာဝီကီမှာ ရေးနေတဲ့သူ အများစုဟာ ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာ ဖောင့်အမျိုးအစားနဲ့ ရေးနေကြတာပါ။ ပိတောက် နဲ့ ရေးနေတဲ့သူရှိသလို မြန်မာ၃ နဲ့ ရေးနေတဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ယူနီကုတ်ဖောင့်ပဲ ကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိရှိ ဖတ်လို့ရပါတယ်။
ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာကိုတော့ ဇော်ဂျီဖောင့် ထည့်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာမှာပဲ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါက အစစ်အမှန်ယူနီကုတ် နဲ့ ဆူဒိုယူနီကုတ်ရဲ့ ကွာခြားချက်ပါ။
နောက်တစ်ချက်က အခမဲ့လွတ်လပ်ဆိုပြီး ဘာသာပြန်သွားတဲ့သူက Free Beer မှာသုံးတဲ့ Free နဲ့ Freedom မှာ သုံးတဲ့ Free နှစ်မျိုးစလုံးကို ခြုံငုံမိအောင် ဘာသာပြန်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခက်အခဲတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားဖြေရှင်းပေးသွားပါ့မယ်။ ကောင်းသည် ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ Feedback ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာဝီကီကနေ အမြဲတမ်းကြိုဆိုနေပါတယ်။
# Kalvin 2:48 PM
ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ပြောချင်တာထက် .. မြန်မာ ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေက ၂၀၀၅ အထိ စာမရှိလို့ ပုံတွေနဲ့ နေရပါတယ်ဆိုတာရယ်။ ( အဲဒီခေတ်ကို မီလိုက်တယ်ဆိုရင် ဆိုဒ်တခု ဖေါင့်တမျိုး ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ကို မှတ်မိမှာပေါ့။ )
အဲဒီတုန်းက ပုံတွေနဲ့ ပြထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေမရှိမဟုတ် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးမှာ ရေးထားတာနဲ့ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ လွဲနေတယ်။
သတင်း/ဆောင်းပါး ရေးသူမှာ လုံးဝ တာဝန်ရှိတယ်။ မှန်သယောင်ယောင် အချက်အလက်များနဲ့ အမှန်တရားဟာ လုံးဝ မတူညီပါဘူး။ ဒါမျိုးလေးတွေ မြင်ရတော့ စိတ်ကုန်မိတယ်။ ဒါပါပဲ။
ဒီ ပရောဂျက်တွေ ဘယ်သူလုပ်နေတယ် မသိပါဘူး။ မြင်မိတာက ဒီက စပြီး မြင်မိတာဆိုတော့ စိတ်မကောင်းတော့ ဖြစ်မိတယ်။